ब्यभिचारी चर्च : नरकभन्दा फोहोर - Vishwa News
ब्यभिचारी चर्च : नरकभन्दा फोहोर
विश्वन्युजको अघिल्ला दुई अंकमा चर्चहरुभित्र हुने व्यभिचारका दृष्टान्त संक्षेपमा थियो । यो अंकमा यूरोपका केही देशका चर्चहरु कसरी यौन शोषणको अड्डा छन् भन्नेबारे केही उल्लेख गरिनेछ । किन चर्च, चर्च सँस्कृति र चर्चभित्रका विकृति हाम्रा लागि जान्न आवश्यक छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामी संविधानतः धर्मनिरपेक्ष देशमा छौं । यद्यपि, नेपाललाई कसले धर्म निरपेक्ष बनायो भन्ने विषयमा विवाद र बहस उस्तै छन् । आन्दोलनको एजेण्डा नै नभएको विषय कसरी संविधानमा घुस्यो ? कसैले यकीन जानकारी दिएका छैनन् । यथार्थ चाँहि धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म निरपेक्षतालाई एउटै तुलोमा जोख्न मिल्दैन र सक्दैनौं भन्ने नै हो ।
धर्म धर्मजस्तो मात्र भएन भने धर्मले निम्त्याउने संकट कति विकराल र भयावह हुन्छ भनेर हेर्न विश्वका कयौं देशका उदाहरण जबरजस्त छन् । धर्म परिवर्तनकै कारण नेपालमा बौद्धमार्गी, बौद्धदर्शनका अनुयायी कसरी मात्रा र गुण दुबैमा संकटमा पर्ने क्रम बढ्दैछ ? किराँत सँस्कृतिका जराजरासम्म फैलिएको धार्मिक अतिक्रमणले उनीहरुको सभ्यता, संस्कृति र पहिचानलाई कसरी संकटउन्मुख बनाउँदैछ ? यी गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि विश्वका चर्चहरुभित्र भए र हुनेगरेका कृत्यबारे जान्न आवश्यक छ ।
किन चीनले गत पौष १० गते देशकै सबैभन्दा ठूलो चर्चमा डोजर चलायो ? किन त्यहाँका चर्च सञ्चालित विद्यालयहरु बन्द गर्न आदेश दियो ? किन चीनले बाइबलको अनलाइन विक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो ? धर्ममा चीनको यो चासोले नेपाललाई छुन्छ कि छुँदैन ? छुन्छ भने कुन हदसम्म छुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तरका लागि पनि हामीले चर्च र चर्चले निर्माण गरेका चित्र र चरित्रबारे बहस गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एक महिनाअघि बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेशनको दोस्रो संस्करणमा सहभागी हुनेक्रममा राजकीय भ्रमणको दौर पूरा गर्नुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चीनले धर्मको विषयसमेतमा चासो देखाएको भन्ने विषय ‘नोटिस’ हुनु अर्को महत्वपूर्ण तथ्य हो ।
भारतमा भर्खरै सम्पन्न चुनावी नतिजाले नेपालमा पनि धर्मको बहसलाई अनेक आयाम र कोणबाट उठान गरेको छ । ती बहस कति सतही छन् वा गम्भीर छन् ? भारतीय जनता पार्टीको जीतमा नेपालमा हिन्दूवादी संघसंस्थाले विजय जुलुश निकाल्नुको अर्थ के ? यो पाटोमा विमर्श हुनुअघि हामीले धर्मलाई धर्म र राजनीति दुबै सन्दर्भमा अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसैले विश्वसन्देशको यो तेस्रो अंकमा चर्च, चर्च सँस्कृति र चर्चभित्रका विकृतिहरुको विषय निरन्तर गरिएको हो ।
अमेरिकाकै बाँकि अंशः सन् १९९० को दशकमा पादरीहरु पौल सान्ले र जन जियोघानको दूराचार सतहमा आएपछि फैलिएको तरंगले अमेरिकी समाजलाई पुनः एकपटक चर्चबारे परम्परागत धारणामाथि पुनविचार गर्न बाध्य बनायो । अमेरिकी चर्चहरुमा हुने अर्को दुर्दान्त शोषणलाई विस्कन्सिन राज्यको प्रकरण (सेन्ट जोन्स स्कूल नामको बहिरा तथा सुस्त श्रवण विद्यालयमा मात्र दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीमाथि यौनजन्य हिंसा) ले थप पुष्टी गर्र्यो । भ्याटिकनको नेतृत्व तहमा रहेका लरेन्स मर्फी यो अपराधका मुख्य आरोपी थिए । गत वर्षकै जुन महिनामा वाशिंगटन डिसिस्थित भ्याटिकन दूतावासमा कार्यरत कूटनीतिज्ञ एम सी अल्बेल्र्टो क्यापेला चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणमा मुछिएर पाँच वर्षका लागि जेल परे ।
पछिल्लो दशक अमेरिकामा चर्चहरुबाट भएका उत्पीडनका घटना लुकाउन र दबाउन ठूलो धनराशी खर्च भएको समाचार आइरह्यो । सन् २००३ को सेप्टेम्बरमै ८५ मिलियन डलर खर्च गरेर चर्चपीडितहरुको मुद्दाहरु सामसुम गर्ने प्रयत्न बोस्टन आर्कडियोसिज प्रकरण ९द्ययकतयल ब्चअजमष्यअभकभ क्अबलमभि० ले कुख्यात छ । यस्तै सन् २००७ मा लसएञ्जलसदेखि आर्कडियोसिजसम्मका ५०४ जना पीडित मनाउन ६६० मिलियन डलर क्षतिपूर्ति तिरेको सार्वजनिक भयो (समाचार, बीबीसी, जुलाई १६, २००७) । क्यालिफोर्नियामा सन् २००२ देखि पाँच वर्षको अवधिमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति चर्चभित्र यौन हिंसाको शिकार भएको उजुरी परेको थियो । यही उजुरी सल्टाउन उक्त धनराशी खर्च भएको हो । प्रकाशित समाचारहरु अनुसार अमेरिकामा चर्चपीडितहरुका लागि अहिलेसम्म २ खर्बभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको चर्च पीडितहरुको सञ्जालले उल्लेख गरेको छ ।
जर्मनीका चर्च पनि त्यस्तै;
९ वर्षअघि जर्मनीका ठूला २७ मध्ये १८ वटा क्याथोलिक चर्चमा भएको अनुसन्धानले ३ सयभन्दा बढी बालबालिकामाथि यौनहिंसा र शारीरिक शोषण भएको तथ्य सार्वजनिक गर्यो । जेसुईट स्कूल, क्याथोलिक स्कूल र पोपका दाजु मुनसिग्नोर जर्ज राप्जींगरले नेतृत्व गरेको रेगेन्सबर्ग स्कूलसमेत गरी १७० विद्यार्थीमाथि वर्षौदेखि शारीरिक शोषण भइरहेको पाइयो । चर्चमा कर्मचारी र पादरीहरुको उद्देश्य प्रार्थना गर्नु र गराउनुभन्दा यौन हिंसाको अवसर खोज्नु मात्र रहेको आरोप लागे । जब यस्ता सयौं घटना बाहिर आए, जर्मनीमा उच्चस्तरीय आयोगहरु गठन भए । र, आयोगले भन्यो — ‘चर्चमा धर्माधिकारीहरु यौनलिप्सामा लिप्त छन् ।’
जर्मनीको क्याथोलिक कार्डिनल चर्चमा भएको यौन दूराचारको सिलसिलेबार घटनालाई लिएर जर्मन विसप कन्फ्रेन्स प्रमुख कार्डिनल माक्र्सले ‘चर्चमाथिको विश्वास र भरोसा नष्ट भएको’ भन्दै चर्चका पादरी र विसपहरुले लुकाएको, दबाएको र वेवास्ता गरेका हजारौं घटनाले इसाईमाथिको आस्था धराशायी बनाएको बताए (सेप्टेम्बर २५) । अध्ययनअनुसार त्यहाँको क्याथोलिक चर्चमा सन् १९४६ देखि सन् २०१४ सम्म चार हजारभन्दा बढी बालबालिकाको शोषण भएको भेटियो । चर्चका १ हजार ५ सय ७० पादरीले चार हजारभन्दा बढी नाबालक, किशोर र किशोरीको यौन शोषण गरेको पाइएको हो । पत्याउनुहुन्छ, अधिकांश पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा कम थियो ? विसप कन्फ्रेन्सकै आदेशमा भएको अध्ययनको नेतृत्व ह्यारोल्ड डाइसिंगले गरेका थिए । प्रतिवेदनले १४२९ चर्च इलाकाका पादरी र चर्चका कर्मचारी दूराचारी रहेको निश्कर्ष निकाल्यो । के फादर, के विशप, के कार्डिनल सबको निशाना बालयौन दुराचार रहने गरेको फेला पर्यो । दूराचारी पादरीहरुमा ४२ प्रतिशत अरु गम्भीर आरोपी छन् । पीडितमा भने ६३ प्रतिशत बालक, छात्र, किशोर र ३५ प्रतिशत बालिका, छात्रा, किशोरी छन् । अध्ययनअनुसार, चर्चमा प्रार्थना गर्न एवम् धार्मिक कक्षा लिन जाँदा सबैभन्दा बढी दूराचारको शिकार भएको पाइएको छ ।
जर्मनीमै उक्त अध्ययनमा पीडितको संख्या लुकाइएको र अपराधीहरुलाई बचाउने उद्देश्य राखिएको आरोप लाग्यो । अर्थात् व्यभिचारको तस्वीर देखाइएको भन्दा भयावह र आततायी रहेछ । जर्मनीमा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र झण्डै १२ हजार बाल यौन दुर्व्यवहारको घटना दर्ता भएको छ । एकिगे टिस एउटा प्रतिनिधि संगठन हो जसले चर्चमा बलत्कार, यौन शोषण र दुर्व्यवहार ब्यहोरेका पीडितको पक्षमा बोल्दै आएको छ । थप जानकारीका लागि तपाई उक्त संगठनको पृष्ठ केलाउन सक्नुहुन्छ ।
आयरल्याण्डका चर्च झन् फोहोरी;
आयरल्याण्डमा चर्चहरुभित्र हुने गरेका अनैतिक र अप्राकृतिक गतिविधिको अध्ययन गर्न सन् २००९ मा न्यायाधीश योभ्नी मर्फी नेतृत्वमा स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग गठन भयो । आयोगले त्यहाँ पछिल्लो ३० वर्षमा भएका सयौं दुराचारका बिवरण सार्वजनिक गर्यो । र, लुकाउने प्रयास भएका घटना ४४० वटा मुद्दा किटानी गर्दै लुकाइएका घटना हजारौ हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्यो । कतिसम्म भने, चर्चहरुले यौनशोषणकै अभिप्रायले बिद्यालय र अनाथआश्रम वा आश्रयस्थल चलाउने गरेको भेटियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अखबारहरुले ‘आयरल्याण्डका चर्चहरु बालबालिकाका लागि नरकभन्दा फोहोर रहेको’ टिप्पणी गरे । तात्कालीन धर्मगुरु पोप बेनेडिक्ट सोह्रौंले आयरल्याण्डका जनतासँग लिखित माफी मागे (२० मार्च २०१०) तर पोपको माफीले चर्चहरुमा भएका अपराधका घटना लुकाउन सकेन ।
आयरल्याण्डमा गत अगष्ट २६ मा हजारौंले सडकमा विरोध प्रदर्शन भरे । सडकमा थिए चर्चका पादरी र विशपहरुबाट यौनहिंसाको शिकार भएका पीडितहरु । त्यहाँ सन् १९८० देखि नै चर्चहरुमा हुने यौन दूराचारको विषय बाहिर आउन थालेको थियो । तर घटनालाई तात्कालीन पोप जन पलले कूटनीतिक छुटको साहारा लिएर दबाएको बताइन्छ । कोल्म गर्मेन नामका पीडितले आयरल्याण्डमा पोपको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा त्यतिबेला आफूजस्तै अन्य दर्जनौं बालबालिकामाथि भएका दूराचारको घटना लुकाउने पादरीहरुको बारेमा पोपबाट जान्न मन लागेको बताए । यो प्रदर्शनीलाई आइरिस टाइम्सले सर्वाधिक महत्व दिएको थियो । कारण, पत्रकार म्यारी कोलिन्स आफैं चर्चमा हुने यौनहिंसाका पीडित र साक्षी थिए (कालिन्सको व्यक्तिगत बिवरण) ।
यसअघि चर्चमा भएका दुराचारका दस्तावेज सुरक्षाका खातिर आर्थिक भ्याटिकनले आयरल्याण्ड सरकारसँग सौदाबाजीको प्रस्ताव गरेको खुलासा भइसकेको थियो । पूर्व आइरिस राष्ट्रपति म्यारी म्याकएलिसले ‘सन् २००३ मै भ्याटिकनका तात्कालीन विदेशसचिव कार्डिनल एञ्जेलो सोदानोले सौदाबाजीको प्रस्ताव गरेको’ खुलासा गरेर चर्चबाट भइरहेका अत्याचारविरुद्ध मुख खोलेकी थिइन् । कार्डिनल सोदानोले आयरल्याण्डका पूर्व बिदेशमन्त्री देर्मोट अथेरनमार्फत सन् २००४ मा पुनः अर्को प्रस्ताव गरेको पनि समाचार आयो ।
‘भ्याटिकन आफैं चर्चमा हुने दुराचारका घटना लुकाउन, ढाकछोप गर्न संलग्न छ र यसका लागि ऊ सम्बन्धित देशका सरकारसँग सिधै सम्पर्क राख्छ’ चर्चपीडितहरुसँग सम्बन्धित रहेर दशकौं लामो अनुभव बटुलेका फादर थोमस डोयल भन्छन् ‘नियोजित, संगठित, अपराधहरुमा माफी मागेर चर्च जोगाउने प्रपञ्च निन्दीय छ र हजारौं पीडितको बलिदानी दिएर चर्च जोगाउनु आमअपराध हो ।’ यो भनाई पोप फ्रान्सिस्को पादरीहरुको परिवारको विश्व सम्मेलन (२४ अगष्ट, २०१८) मा सहभागी हुन आयरल्याण्ड रहँदा आएको हो ।
यूरोपका बेल्जियम, फ्रान्स र चिलीका चर्चहरुको नारकीय बर्णन बाँकि नै छन् । विश्वसन्देशको आगामी अंक भारत र नेपाल सन्दर्भमा हुनेछ । र, क्रमशः धर्मका तन्तुलाई राजनीतिसँग जोड्ने प्रयास गरिनेछ ।
भूकम्पपिडितमा नाम टिपाउन छुट्यो ? प्राधिकरणले थप्यो छुटपुट टिपाउने अवधि
विश्वकपमा अस्ट्रेलियाको दोस्रो जीत, हार्यो वेस्ट इन्डिज